Community Minneapolis Muujiyeyaasha
Sannadkan, Golaha iyo Duqda magaalada meel marisay aragti magaalada cusub, qiyamka, iyo gool & istaraatijiyadda. Waxaan u aragnaa in ay waxyaalahan noo sheegaya waxa aan rabnaa in aad ku gaadhno shaqadayada. Goolasho waa:
Nolol wanaagsan: Minneapolis waa amaan iyo nolol iyo waxay leedahay hab firfircoon oo xiran nolosha
Hal Minneapolis: Minneapolis waa degan siman una wada qaybqaataan qofkasta go’aanada una wada baraaraan ama barwaaqooban ay ku haraan si dhammaan dadka deggan Minneapolis ka qayb karaan oo ay barwaaqoobaan
Xarunta dhaqdhaqaaqa ganacsiga & casriyaynta: Ganacsiyada - waaweyn ama yaryar oo Minneapolis ku bilowdo, dhaqaaqo, joogo iyo koraan
Meelo wanaagsan: Meelaha dabiiciga ah iyo dhismayaasha wada shaqeyno iyo deegaanka la ilaaliyo
Magaalo shaqaysa:Dowladda magalaada ina si fiican u maamushaa oo isku xirta bulshada ay u adeegto
Mashruuca tilmaamayaasha Beesha noo sheegi doonaa, si heer sare, sida badan horumarka aan samaynay goolka. Bulshada nafteedu waxay leedahay door muhiim ah ka mashruucan. Waxaanu raadinaynaa in dhamantiin inaad noo sheegtiin waxa mawduucyo ama mawduuc aan u cabbirno. Tusaale ahaan, waxa aanu "Nolol Wanaagsan" macnaheedu in kuwa ku nool, shaqada, iyo ciyaaro Minneapolis? (Ma degan isku xiran, degan lagu raaxaysto, jidadka ammaan ah, ama qaar ka mid fikrad kale?) Waxaan isticmaalayna gacan furid iyo Crowdsourcing technology IdeaScale, si loo helo fikrada bulshada madaamo bulshado cod weyn ku ledayahay tilaabooyinka rabna ina qadno. Iyada oo ay iskaashanaysaan iyo Guddiga our, City waxa ay markaa ku horumarin doontaa tallaabooyin agagaarka kuwa fikrado ku kaca in hogaanka..
Si aad wax badan oo ku saabsan mashruuca Community tilmaamayaasha bartaan fadlan riix halkan
Dhagoolayaasha iyo dadka dhagaha culus waxay isticmaali karaan adeeg gaara, hadaad u baahantahay fadlan wac; 612-673-3000 TTY 612-673-2157.
Sida loo isticmaalo website kan
In abuurtid fikrad cusub, waxa siisa click cusub oo ku saabsan badhanka oo guduud Submit New Idea oo ku yaalo dhinaca midig ee boggan. Waxaad u baahan doontaa in ay galaan horyaalka ah Title, sharaxaad ku saabsan fikradaada Description, dooro xilli fikradaada ee Campaign.